Ardeyda Aragga Naafada Aragga ah ayaa Maalin La Yaab Leh Kartepe | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara41 KocaeliArdayda Naafada ah aragga ayaa kuhelay maalin aan la ilaawi karin Kartepe
16 / 01 / 2020 41 Kocaeli, GUUD, Gobolka Marmara, TURKEY, TELPHER
ardayda aragga liita waxay ku raaxeysteen caloosha
Waaxda Caafimaadka Naafada iyo Waaxda Adeegyada Naafada ee Kocaeli Magaalo-weyda ee Magaalada Kocaeli iyo Agaasinka waaxyaha Adeegyada Waayeelku waxay ku guuleysteen howlo macno leh oo loogu talagalay carruurta aragga Naafada ah. Wareegtadan dhexdeeda, ardayda, macallimiinta iyo qoysaska ardayda aragga ah ee wax ka dhigata fasalka gaarka ah ee wax ka barata Dugsiga Hoose ee Darıca Bar had waxay ku yeesheen maalin lama ilaawaan ah oo ku taal Kartepe. Markii ugu horreysay noloshooda carruurtu Kartepe carruurtu waxay heleen maalin farxad leh oo ku ciyaaraya barafka barafka.
Carruurta aragga naafo ah, Müge Deniz, oo ah shaqaalaha waaxda qaybta Adeegyada Naafada, ayaa sharaxaad ka bixiyay cod. Sifooyinka aagga ay ku sugnaayeen waxaa lagu sharaxay carruurta farsamada tilmaanta codka. Ka dib markii uu sharraxay waxyaabaha ku jira iyo qaababka walxaha, sida geedaha, barafka, cirka iyo barafka hareeraha ku wareegsan, wuxuu la ciyaaray carruurta barafka. Ardayda xiisaha badan waxay gacmahooda ku qaateen kubbadda-barafka waxayna ku tuureen hawada si aan kala sooc lahayn.
Waxaan taabtay dhulka markii ugu horeysay
Dila Nariye İnal; Waxaan ahay 10 jir. Waxaan aadayaa fasalka Fasalka Indhaha ee Darica. Waxaan imid Kartepe markii iigu horeysay noloshayda. Markii aan dhulka taabtay, waxay la mid ahayd inaad biyo qaadatid, laakiin biyuhu waxay qabow ahaayeen. Ku dul boodista barafka waxay la mid tahay inaad ku socoto tareen xawaare sare ku socda. ”
9 MUUQAALKA MUUQAALKAAGA
Isagoo sheegay in ardayda lagu baray maadooyin kaladuwan marka loo eego baaxadda mashruuca mas'uuliyadda bulshada, maamulaha Metin Demirci wuxuu yiri, “Iskuulkeena waxaan ku leenahay fasal indho la’ oo araga ah. Waxaa jira 9 arday fasalkaan. Waxaan higsaneynaa inaan qaadno dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah nolosha waxbaridda ardaydeena oo aan u fududeyno noloshooda. Waxaan ula imaanay ardayda Kartepe howlahan aan ka wadnay degmada Kocaeli Metropolitan District. Waxaan jecel nahay inaan uga mahadcelino Dawlada Hoose ee Bixinta fursada noocan ah ardaydaya ..
Booliska Maskaxda naafada ah ee ku jira Tareenka Xawaaraha Sare
Maalin aan la ilaawi Karin Dooxada Baaskiiliga
Ogeysiinta Ugaarsiga: Khariidadda dulsaarka dusha sare ee la arki karo ee aragga iyo maqalka liita…
Muwaadiniin aragtiyeed oo daciif ah ayaa ku soo dhacay gaadhiga iyagoo isku dayaya inay raacaan tareenka
Ka jawaab celinta moobaha laga helo mujtamaca naafada ah
Sawir-la'aanta baahsan ee saxafiyiinta ayaa hoos u jiiday tareenka iyagoo ogaaday riyadiisa
IZBAN kacdoonka dadka aragtida ah ee naafada ah ee ka soo laabanaya dhimashada
Haweeneyda Muuqaalka ah ee Jilicsan Ma Qaadi Karaan Metrobus Iyadoo Tilmaamaha Aan
KGM waxay calaamad u tahay sida dadka muwaadiniinta ah ee indho la'aanta ah sida joke
Dadka Muwaadiniinta ah ee Aragga Indha La'aanta ah waxay ku dhufteen Baaskiilka Bus ee Kocaeli
Gudoomiyaha Soyer Pedals oo leh shakhsiyaadka aragga liita
Qof rakaab ah ayaa wadnaha istaagay oo istaagay joogsiga Usküdar ee Marmaray
Goobta Kartepe ee Imaginary Cable
Festifaalka Jidka Nabada ee Kaarka
Dugsiga Hoose ee Darica Baris
Ardayda Aragga Naafada ah
Aliağalılar waxay dooneysaa inay ka faa iideysato adeegyada ESHOT
Daah-furka Mashruuca Madaarka Kaarboon-aanta-lahayn oo Ka Soo Horjeedka Diirimaadka Dunida